Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Ivory Coast Yves Bissouma Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Ihe omuma anyi nke Yves Bissouma na agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ibu, Ugbo ala, ndu na ndu nke onwe.
Ọ bụ nkọwa dị nkenke nke akụkọ ndụ Yves Bissouma site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka ị nụrụ ụtọ ọdịdị nke Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya na ọganihu ọrụ ya.
Yves Bissouma Biography. Lee akụkọ ndụ ya site na onye ọ bụla gaa dike.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ Onye na-alụ ọgụ na Brighton onye na-etinye nsogbu ịma jijiji ọkpụkpụ. Agbanyeghị, ọ bụ mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ ya, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. N’etughi oge, ka anyi bido.
Yves Bissouma Nwatakiri Akuko:
Maka onye nwere mmasị na Autobiography, aha ya bụ Zokora. A mụrụ Yves Bissouma na 30th nke August 1996 na obodo Issia na Ivory Coast. Amuru ya na nne na nna ya, Mr na Mrs Bissouma.
Ezigbo ezinụlọ nke Yves Bissouma:
N'ụzọ na-akpali mmasị, mgbe ị na-ege ntị na agụụ nke Zokora na-ekwu banyere Mali, ị ga-eche na ọ bụ onye Malian. Agbanyeghị, nwa amaala Issia si Ivory Coast wee nwee mgbọrọgwụ ezinụlọ ya na Côte d'Ivoire.
Yves Bissouma bụ onye Ivorian na nwa afọ Issia.
N'ezie, kpakpando bọl na-etinye oge ka ọ bụ nwata (afọ 12) na-eto eto na mpaghara Yopougon Sicogi, na Abidjan, Ivory Coast. Oge nwata Bissouma bu ihe eji egwuri egwu nke egwuregwu na ụkpụrụ nduzi nke ezughi oke.
Enweghị m nkà dị ka nwata. Ma, emechara m ngwa ngwa ghọta na ndị mmadụ ebughị àgwà pụta ụwa kama na ha ga-arụsi ọrụ ike iji nwee ihe ịga nke ọma. N'ihi ya, m họọrọ inwe obi ike karịa nkà. ”
Ezigbo ezinụlọ Yves Bissouma:
N'ezie, o were obi ike dị ukwuu maka nwata ahụ ka ọ rọọ nrọ ma rụsie ọrụ ike. Ndị mụrụ ya dara ogbenye ma nwee ohere ịga nke ọma. Ọ dabara nke ọma, ọ grit ma mara otú e si egweri. Dị ka ya:
“Esi m n’ezinụlọ dara ogbenye. M na-eche banyere ya mgbe niile. Ọ bụ ihe ahụ na-enye m ike ime ihe m chọrọ.
Yves Bissouma Football Akụkọ:
Onye na-anụ ọkụ bọọlụ mgbe ahụ bụ akụkụ nke ọtụtụ klọb na mpaghara Yopougon Sicogi, na Abidjan ebe o tolitere. N'ụzọ dị mma, njikọ aka football ya n'oge mbụ dugara ya na Abidjan obere club Majestic SC ebe akụ na ụba ya ọchị.
Nwere ike ịhụ ya n'etiti ụmụ okoro ahụ? Ọ bụ onye nke atọ site n'aka nri n'etiti ndị guzo n'ahịrị!
Kedu? Ndị otu Bissouma gara asọmpi na Bamako, Mali na ọ mere nke ọma iji tọọ ụtọ. Ná ngwụsị nke asọmpi ahụ, onye na-eto eto na mmadụ 4 ndị ọzọ nwetara akwụkwọ ịkpọ òkù ịbanye JMG Academy Bamako.
N'ihi ya, nwata ahụ dị afọ iri na atọ gwara ndị mụrụ ya ka ha nwee ike ịchụso ọrụ ịgba egwu na ala ọzọ. Dị ka ya:
"O siiri m ike ịhapụ ndị mụrụ m n’ihi na a raara m nye ha mgbe niile. Agbanyeghị, agwara m onwe m na 'Mama na Papa emeela ihe kachasị mma maka m. Ya mere, egosiri m ha na mbọ ha agaghị ada ada. ”
Hụ onye na-eto eto na-eto eto n'oge ọ bụ nwata na Mali.
N'ezie, Bissouma mere nke ọma iji mee ka ndị mụrụ ya nwee nganga ya. N'ezie, ịrị elu ya na ndị otu egwuregwu nke klọb dị oke mma. N'otu aka ahụ, ọ nwere aha na-eto eto ngwa ngwa dị ka maestro midfield nke mere ka Lille meghee ịnabata ya.
Yves Bissouma Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe onye na-eto eto na-eto eto rutere Europe na 2016, ọ na-esiri ya ike ịnabata ọnọdụ ihu igwe. Dị ka ya:
"M ga-akọwa ya dị ka ihe jọgburu onwe ya. N'ezie, aka m na ụkwụ m na-ajụkarị oyi nke na achọrọ m ịkwụsị ọzụzụ, ”ọ na-echeta.
N'ụzọ dị mwute, naanị mgbe ọ na-achọpụta ụkwụ ya, onye bụbu onye nkụzi Lille Marcelo Bielsa kpebisiri ike ịtụgharị ya n'azụ azụ. N'ụzọ dị mma, ọ nọgidere bụrụ onye na-eme egwuregwu, nyere Lille aka izere ịdapụ, wee malite ịkọwa Paul Pogba.
Ihe niile banyere ya gụnyere edozi isi ya ji atụnyere Pogba.
Yves Bissouma Successga nke Ọma Akụkọ:
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere mpempe akwụkwọ a na akụkọ Yves Bissouma nke nwata na akụkọ ndụ ya, ọ bụ kpakpando guzobere nke ọma na Brighton & Hove Albion. N'ụzọ na-akpali mmasị, Bissouma hụrụ Arsenal n'anya ma gwa ndị enyi ya na ọ bụ na-achọ ime ka Gunners gbanwee.
Daalụ ịdị mma, ọ na-atọ ụtọ ile anya na Premier League na North London ga-enwe obi ụtọ ịnabata ya. N'ezie, ihe mgbaru ọsọ 30 yads maka Brighton megide Blackpool zuru ezu iji kwenye na Arsenal na ha achọpụtala ọgụgụ isi zuru oke.
Isga n'ihu na-enwe ihe ịga nke ọma na ebe ọ bụla ọrụ ya na-eduga ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Yves Bissouma Girlfriend ghọrọ nwunye?
Zokora dị naanị afọ iri abụọ na anọ. Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị agwa gị na o nwere enyi nwanyị ghọrọ nwunye? Ọzọkwa, ọ ga-eju gị anya ịmata na o nwere nwa ewu? Nabata na ndụ mmekọrịta Yves Bissouma. Dịka anyị kwuburu, ọ bụ nwoke lụrụ nwanyị nke nwere nwa ewu. Enweghi ekele maka mmasị nke midfielder maka ichebe ndụ nke onwe ya, anyị amaghị onye nwunye ya bụ.
Ọnye na-bụ nwunye Yves Bissouma?
Anyị nwere ike inwe olile anya na onye njikwa Brighton Chris Hughton na-ekpughe. Ọ dị ka nna nke abụọ na kpakpando bọl. N'ezie, mgbe Bissouma bịarutere England, Hughton gbalịsiri ike iji nyere visa na nwunye ya na nwa ya aka ka o wee nwee ahụ iru ala na Premier League.
Ndụ Yves Bissouma ndụ ezinụlọ:
Enwere ihe nzuzo na ọrụ Zokora dị egwu. Ọ bụ ihe nzuzo na-emeghe nke a na-akpọ ezinụlọ. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Yves Bissouma na ụmụnne ya. Anyị ga-emekwa ka eziokwu banyere ndị ikwu ya Ebe a.
Banyere Yves Bissouma Ndị nne na nna:
Anyị anaghị egwu egwu mgbe anyị kwuru na ezinụlọ bụ ihe nzuzo n'azụ ihe ịga nke ọma nke onye ọkpụkpọ ahụ. You maara na nne na nna Bissouma na-ekiri egwuregwu ọ bụla? Ọzọkwa, ha na-enwe mmekọrịta mgbe niile. Ọ maara mgbe niile banyere nkwado na-enweghị atụ nke nne na nna ya ma na-eme ike ya niile ka ọ ghara ịdebanye ihu na ihu ha.
Yves Bissouma na nwanyị nwere ike ịgafe maka nne a.
Banyere ụmụnne Yves Bissouma na ndị ikwu:
Ndị na - agba ọsọ na - ekwukarị inwe ụmụnne. O gosipụtaghị mmekọrịta ọ hụrụ n'anya karịa nke ezinụlọ ya. Yabụ, anyị nwere ike ịtụ anya na ọ na-ekwu maka nne na nna ya ochie, nwanne nna ya, ụmụ nwanne nna ya na ụmụ nwanne nne ya n'ọdịnihu.
Ndụ nke Onwe Yves Bissouma:
Dị nnọọ ka ndị na-agba ụkwụ ụkwụ dị iche, otu ahụ ka ọdịnaya nke agwa ha dị. Nke a na-ajụ ajụjụ a, onye bụ onye egwuregwu bọọlụ pụọ n'ọgba bọọlụ? Site na ihe anyị nwere ike ikpokọta, Bissouma bụ onye egwuregwu dị mfe.
Ọ hụrụ n'anya ime ka ihe dị mfe ma ghara ikwu okwu karịa mkpa. Ọ bụ ezie na onye ọkpụkpọ ahụ na-ekwu okwu banyere oge ọ bụ nwata na onyinye ndị nne na nna na ịrị elu ya, anyị enweghị ike ịgọnahụ eziokwu ahụ na ọ naghị emeghe ikpughekwu eziokwu banyere ndụ ya na nke onwe ya.
Uche dị mfe, nke onwe na nke dị jụụ n'ezie ha anaghị eme ha ka Bissouma ọzọ.
Ka o sina dị, ọ dị mfe ịchọpụta ihe ọ na-eme dị ka ntụrụndụ na ọdịmma. Onye ọkpụkpọ nke onye ọkpụkpọ ya agaghị eme ka ọ bụrụ ezumike banyere ezumike dị mma na njem. Onye na-achọghị ịhụ ụwa ma kporie ndụ okomoko nke ndụ? O doro anya na ọ bụghị Bissouma! N’iburu n’uche mmasị o nwere banyere nwunye ya na ndị mụrụ ya, anyị pụrụ ịghọta na ọ na-enwe mmasị iso ha anọkọ.
Ndụ Yves Bissouma:
Mgbe a hụrụ kpakpando bọọlụ ka ọ na-agbanye mmanụ ụgbọala Mercedes SUV, ọtụtụ ndị na-eche ngwa ngwa ma ọ nwere n'ezie ịnya ịnyịnya ahụ. N’etiti ịkọ nkọ, ndị na-arụ ụka ekweghị eziokwu bụ na Bissouma bara uru na 3 Nde Euro (2.6 Million Pound). Ha amaghi na o na enweta £ 1,300,000 kwa afo na £ 25,000 kwa izu.
Yves Bissouma na-agbaju mmanụ ụgbọala ya.
Olileanya, ọ gaghị eju gị anya ịhụ ya ka ọ bi na nnukwu ụlọ ma ọ bụ ụlọ dị na North London ma ọ bụrụ na ọ ga-aga nke ọma na Arsenal. Karịsịa, anyị nwere obi ụtọ na ị ghọtara na Bissouma maara na ndụ kwesịrị ịnụ ụtọ, na ọ na-ebi ndụ okomoko na nke ahụ.
Eziokwu Banyere Yves Bissouma:
Iji mechie edemede a na Zokora Childhood Akụkọ na Biography, ebe a bụ obere ihe amachaghị ma ọ bụ Eziokwu banyere ya.
Kwa Afọ: £ 1,300,000.
Ọnwa kwa: £ 108,333.
Kwa Izu: £ 25,000.
Kwa :bọchị: £ 3,571.
Kwa elekere: £ 149
Nkeji nkeji: £ 2.48
Sekọnd: £ 0.04
Ebe ọ bụ na ị na-elele Yves Bissouma's Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Brighton.
Nwa nwoke nke Mr na Mrs Bissouma kwenyere na odidi nke anakpo Chineke. Ọzọkwa, nsogbu ndị ahụ na-amasị ya ịbụ Onye Kraịst. Karịsịa mgbe ị na-amụ foto dị n'okpuru.
Ọ na-eyi chaplet ebe a nke na-eti mkpu na Kristian na Katọlik.
Might gaghị enwe ike ịghọta otú e si emechu Yves Bissouma ruo mgbe ị ga-ahụ ọkwa FIFA nke 75/82. Enwere olile anya, dọọrọ uche ndị ọchịchị na ikpe na-ezighi ezi a na nyocha dị elu dị nso.
Nyochaa elu dị nso.
Eziokwu # 4 - Banyere Yves Bissouma Nickname:
Aha aha onye ọkpọ egwuregwu ahụ bụ Zokora n'ihi na ọ hụrụ n'anya ma nwee mmasị na mbụ Cote d'Ivoire mba Didier Zokora. Dị ka ya:
“Mma mma nte enye ebrede mbre. Ọ dị mma na ịgbachitere ma na-arụ ọrụ siri ike. Karịsịa, anyị gụrụ otu akwụkwọ n'ihi na ọ tolitere na agụmakwụkwọ Jean-Marc Guillou, n'agbanyeghị na ọ bụ mba ọzọ. ”
Eziokwu # 5 - N'iji tụnyere Shawn Michaels:
A na-atụle iji ya tụnyere Paul Pogba, onye ga-ekwere na onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịdọrọ atụnyere onye mgba? Yves Bissouma jiri ya tụnyere akụkọ WWE Shawn Michaels maka ịkụ Jamal Lewis na ihu. Na nyocha ya, ọ nwara ka ọ na-agahie. N'ụzọ dị mma, Jamal lanarịrị ya.
Ọ nwere ike ịbụ onye mgba na mbara igwe ọzọ.
Aha zuru ezu: Yves Bissouma.
aha otutu: Zokora.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 30 nke Ọgọstụ 1996.
Ebe amụrụ onye: Issia na Ivory Coast.
Ogologo na cm: 182 cm.
Children: Ee, nwa ewu.
Net uru: Nde 2.6.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na akụkọ Yves Bissouma nke nwata na akụkọ ndụ ya. Anyị nwere olile anya na njem nke Midfield site na mkpọmkpọ ebe nke Mali ruo Premier League emeela ka ị kwenye na ọ nweghị ihe agaghị ekwe omume. Dị nnọọ ka Bissouma gosipụtara obi ike niile site na ịrụsi ọrụ ike iji nweta ọkwa ọ nọ na ya.
Ọ dị anyị mkpa n'oge a ịja ndị nne na nna Midfield mma maka nkwado ha na ọrụ ịgba bọọlụ ya n'okwu na omume. Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya ka ọ dị mma ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru.
Bọchị agbanweela: Machị 12, 2021
Bọchị gbanwee: Eprel 4, 2021